Dia an-tsehatra fito any Kildare - IntoKildare
fianakaviana, mpivady, Amin'ny teti-bola, Vatosoa miafina, Mpankafy any ivelany, Zavatra tokony hatao
Raha mitady ny vovoka hiala amin'ny tranokala ianao ary hiala amin'ny rivotra madio amin'ity faran'ny herinandro ity, maninona raha tsindrio ny sasany amin'ireo Kildare mahatalanjona ireo miala amin'ny lisitrao!
Raiso ny fitempon'ny fony rehefa mizaha izay mahitsy eo am-baravarana ianao! Beautiful Kildare dia manana ny sasany amin'ireo làlana mahavariana indrindra eto amin'ny firenena, miaraka amin'ireo relikijika sy toerana arkeolojika tranainy manerana ny distrika, ary amin'ireo fitsangatsanganana fito ireo dia tsy ho tafiditra amin'ny hetsika faran'ny herinandro ianao!
Lahatsoratra zarain'i Toni Haberland Photography (@tonihaberlandphotography)
Dimy minitra fotsiny avy eo amin'ny vohitra Rathangan Village no misy ilay kanto sy tsy hita Killinthomas Woods. Feno bluebells amin'ny lohataona sy sy volomboasary ravina ravina amin'ny fararano, misy safidy ho an'ny diany fohy sy lava, manomboka sy mifarana eo amin'ny carpark avokoa.
Misy tsangambato feno teboka manerana ny lalana, ka mahatonga ity diabe 10km ity ho mora zahana ho an'ny mpitsidika. Ireo mpandeha an-tongotra dia afaka mankafy ny tontolo tontolo iainana isan-karazany amin'ny ala, miaraka amin'ny karazam-biby sy karazam-biby maro karazana.
Lahatsoratra iray nozarain'i Rob Walshe (@the_irish_dogfather)
Jereo ny tsara eny ivelany miaraka amin'ny mpandehandeha manodidina ny valan-javaboary mahatalanjona Castletown House! Misokatra mandavataona, ny zaridainam-paritra dia mirehareha amin'ny lalana mahavariana sy ny fitsangatsanganan'ny renirano, ary afaka miditra tanteraka.
Miorina amin'ny tantara, ity valan-javaboary ity dia fonenan'ny karazan-javamaniry sy karazan-javamananaina, koa tazomy ny masonao any anaty ala, renirano ary farihy!
Lahatsoratra iray nozarain'i Emma-Jane Leeson (@emma_jane_leeson)
Any amin'ny 30 minitra mahery eo ivelan'ny tanànan'i Kildare no misy ilay Valan-javaboary ala Donadea. Misy lalan-tongotra telo misaraka, manomboka amin'ny 1km ka hatramin'ny 6km, misy zavatra mifanaraka amin'ny sokajin-taona rehetra eto.
Mandritra ny fitsangantsanganana antoandro fohy dia araho ny Lake Walk, izay mitsangantsangana manodidina ny farihy feno rano, ary tsy mihoatra ny antsasak'adiny. Eo ambanin'ny 2km fotsiny ny Nature Trail, izay mamakivaky ny sasany amin'ireo maritrano manaitra ny tany. Ho an'ireo mpandehandeha maniry fatratra, ny Aylmer Walk dia lalana 6km Slí na Slainte izay mitondra mpandeha an-tongotra manodidina ny valan-javaboary.
Ny làlan'i Barrow
Lahatsoratra iray nozarain'i 𝑱𝒂𝒔𝒏𝒂 𝑴𝒂𝒅𝒛𝒂𝒓𝒊𝒄 (@mrsjasnamadzaric)
Ankafizo ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro amin'ny moron'ny iray amin'ireo renirano malaza indrindra any Irlandy, ny River Barrow. Miaraka amin'ny zavatra mahaliana isaky ny mandeha amin'ity towpath 200 taona ity, ity renirano ity no mpiara-dia tonga lafatra ho an'izay mandeha sy bisikileta manamorona ny Barrow Way.
Alao ny zava-maniry sy ny biby hita eny amoron'ny morony, ny hidin-trano mahafinaritra sy ny tranon'ny mpiambina hidin-trano tranainy.
An torolalana audio dia misy fihainoana mihoatra ny adiny roa, feno tantara sy fampahalalana momba ny mpanjaka fahiny tao Leinster, ny masom-bavan'ny Devoly, ny katedraly kely St Laserian sy maro hafa.
Ny làlan'ny mpanjaka
Lahatsoratra zarain'i ColletteMichelle (@scorpiocollette)
Làlana iray mitovy amin'ny lalana Barrow Way, io tsipika mahavariana io mandeha dia tsara ho an'ireo izay te-hisotro kafe ary mandeha foana. Mandeha lavitra araka izay itiavanao azy dia afaka mitsambikina mora foana amin'ny fitateram-bahoaka ianao mba hamerenanao ny fiatombohany.
Misy ohatra maromaro manan-danja amin'ny arkeolojia indostrialy tamin'ny faramparan'ny ambin'ny folo ambin'ny folo taona mba hankafizin'izy ireo eny an-dalana, ao anatin'izany ny Ryewater Aquaduct izay mitazona ny lakandrano avo ambonin'ny reniranon'i Rye, ary naharitra enin-taona ny fananganana azy.
Lahatsoratra iray nozarain'i Daniel Craig (@im_daniel_craig)
Ankafizo ny ravina tsara tarehy amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko isaky ny Alahady mamaky ny Athy Slí. Manomboka amin'ny lapan'ny fitsarana (naorina tamin'ny 1857) teo amoron'ny ony Barrow, ity lalana 2.5km ity dia mifanila amin'ilay renirano, miakatra amin'ny làlan'i Barrow, mandalo ny Fiangonan'i St Michael any Irlandy, eo ambanin'ny tetezan'i Horse Bridge sy ny Railway Bridge, ary manaraka ny Lakan-drano.
Ity zotra boribory ity dia azo zahana amin'ny lafiny roa ary tsara ho an'ny namana volo mandehandeha, manosika mpandeha an-tongotra, na mivoaka mandritra ny 30 minitra hankafizan'ny tara-masoandro amin'ny volana feb.
Lahatsoratra zarain'i Regina (@reginaoftheland)
Any amin'ny faritra atsinanana atsinanan'i Irlandy no misy ny St Brigid's Trail, ivon'ny fiandohan'ny Kristianisma tany Irlanda.
Ny tantara mahavariana an'i St Brigid, ilay olo-masina mpiaro vehivavy any Irlanda, ary ny fotoanany tao Kildare dia nasongadina nandritra ny St Brigid's Trail rehefa mandray ireo mari-toerana malaza indrindra ao Kildare Town ianao.
The lalana manomboka ao amin'ny Kildare Heritage Center eo amin'ny Market Square izay ahafahan'ny mpitsidika mijery fampisehoana an-tsary amin'ny St Brigid. Avy eo ny làlana dia mitondra anao amin'ny dia mamaky ny katedraly St Brigid's Church, St Brigid's Church ary mazava ho azy ny Solas Bhríde Center izay natokana ho an'ny lova ara-panahy an'ny St Brigid sy ny maha-zava-dehibe azy io amin'izao androntsika izao. Ny toerana farany amin'ny fitsangatsanganana dia ny lavadrano St Brigid any Tully Road, izay ahafahan'ny mpitsidika mandritra ny ora milamina.
fianakavianampivadyAmin'ny teti-bolaVatosoa miafinaMpankafy any ivelanyZavatra tokony hatao
48 ora ao Kildare - ilay mpizahatany fialan-tsasatra fohy